यो परियोजना असफल हुनबाट बचाउन3अनिवार्य अंकहरू | यो
यो परियोजना असफल हुनदेखि जोगिन3अनिवार्य अंकहरू
कार्यहरू प्रायः अप्रत्याशित हुन्छन्, अनगिन्ति टुक्राहरू समावेश हुन्छन् र ती समावेशहरूमा विभिन्न समस्याहरू पनि समावेश गर्दछ। वास्तवमा विस्तारित हुन्छ सामान्यतया नगर्ने बाटो जुन हामीले हामीलाई चाहिन्छ। हामी नियमित रूपले कमसँग कम र गति गतिको साथ हामी हामीसँग सही छौं एक अनुरोध बनाइरहेका छौं। अहिले र फेरि, हामी यी कन्फिगरेसन को बाबजुद हाम्रो प्रयासमा फलफूल छौं।
धेरै प्रमुख घटकहरू उद्यम उपलब्धिमा थपिन्छन्, तथापि आवश्यक तीनहरू साझेदार साझेदार स्वीकार्य प्रमाण र विश्लेषण, सम्भावनात्मक संचार, र विशिष्ट उद्यम आवश्यकताहरू, साझेदार इच्छाहरू र कामको हदसम्म निरीक्षण गर्न।
विस्तारको आवश्यकताहरू, स्टेकहोल्डर अपेक्षाहरू र कार्यको दायरा
साझेदारहरूले उद्यम-उद्यमको माध्यम छनोट, आलोचना वा नतीजाद्वारा प्रभाव पार्न सक्छन् वा प्रभावकारी हुन सक्छ-वा तिनीहरूले अनिवार्य रूपले आफैं प्रभावित हुन सक्दछन्। प्रभाव वा देखावट प्रभाव वा प्रकृतिमा सकारात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छ।
अधिकांश उपक्रमहरूसँग साझेदारहरूको विस्तारित संख्या छ। सबै पार्टनरहरूलाई पहिचान गर्नाले उद्यम उपलब्धिको शट बनाउँछ। तपाईंले सुरक्षित डेटा, अन्तरगत सम्बन्ध, प्रभाव, सम्भावना समावेश, र उद्यम परिभाषा, निष्पादन र अन्तिम परिणामहरूमा सम्भावित प्रभावको बारेमा महत्त्वपूर्ण डेटा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। यो डाटा प्राप्त गर्नको लागी, साझेदारहरूको विशेषता अनुसार उनीहरूको विशेषताहरूको अनुसार। यसले यसलाई हरेक पार्टनरसँग सम्झौता गर्न प्रणाली निर्माण गर्न कम मांग गर्नेछ। कुञ्जी जडानहरूमा विस्तारित ध्यान उद्यम उपलब्धिको लागि आधारभूत छ।
तपाईं कसरी इच्छा देखाउनुहुन्छ? संचार मार्फत। यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ कि एक धेरै अधिकृत संचार त्यहाँ उद्यम र साझेदारहरू फिट गर्न अनुकूलित व्यवस्था गर्दछ।
सम्बोधन गरेर सिक्नको लागि आधारभूत अन्तराष्ट्रिय भागको एक भाग हो। परियोजना प्रबंधन संस्थान (पीएमआई®) ले देखाएको छ कि एक उद्यम निर्देशक को 90 प्रतिशत रोजगार संचार हो, जस्तो कि यो हुन सक्छ, यो हाल मा कुरा गर्न को लागी सीमित छैन। वैध संचारमा ट्यूनिंग, प्रतिपक्षी रिपोर्टहरू, रिपोर्टहरू सिर्जना गर्दै, एक सभाको साथ सुरू हुने डाटा सिफ्टिंग त्यसपछि अर्कोमा र त्यसमा। यो उचित रूपमा गर्नका लागी तपाईलाई एकैचोटि परिचित संचार व्यवस्थापन व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ। यस तरिकाको कुनै पनि व्यवस्थाको उत्पादन छानबिनलाई सोधिएको छ छ: छ, कस्ता, कहाँ, कहां, कसरी र किन?
को को लागी अवश्य गरिनु पर्छ?
बिन्दुमा के गर्नु पर्छ?
यो किन भयो?
तपाईंको उद्यम सुरू गर्नु अघि, तपाइँले सबै उद्देश्यहरू, गन्तव्यहरू र पूर्वाधारहरू स्पष्ट पारेका छन्। कुन कुरामा स्पष्टता प्राप्त गर्दै र महत्त्वपूर्ण साझेदारहरूबाट अन्तिम पछाडि खरीदमा तुरुन्तै आवश्यक छ। यी आवश्यकताहरू, सम्बन्धित उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू र डिलिभमेन्टहरू सँगसँगै, समाप्त हुने कामको सीमामा परिणत गर्नुहोस् र तपाईंको उद्यमको जीवनमा परिमार्जन गरिनेछ। जस्तो कि यो हुन सक्छ, बन्द मौकामा जुन तपाईं पूरा गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ को एक बलियो समझ संग सुरू हुनुहुन्न, तपाई कल्पनाको कुनै पनि भागबाट सुरु हुँदैन।
यो परेशानी हुनेछ, यदि अपरिहार्य छैन भने, साझेदारको दृष्टिकोणबाट प्रगति गर्न यदि तिनीहरूको उद्यम विवेक र इच्छाको बारेमा स्पष्टताको अनुपस्थिति हो भने। यो कारण साझेदार हुनु पर्छ अनि उनीहरूको चाहनाहरू उद्यम जीवनचर्यामा समयको रूपमा दाँतको रूपमा विच्छेदको रूपमा परिस्थितिमा आशा गर्न सकिन्छ।
तीन प्रमुख स्ट्रिप्स-स्वीकार्य प्रमाणपत्र र उद्यम साझेदारहरूको विश्लेषण, एक सम्मिश्र संचार व्यवस्था सिर्जना र उपयोग, र उद्यम व्यवस्था को माध्यम ले खतरनाक किनारा मा काम को मात्रा को सावधानी पूर्वनिर्धारित, साझेदार इच्छाहरु र रक्त को कम सटीक अंतर को प्रमाण र निष्पादन धेरै प्रगति गर्न क्षमता सुधार।